ACCUEIL » SPORTS »Man City Quadruple
Pep Guardiola ayaa ku adkeysanaya in ku guuleysiga Quadruple uu noqon doono "wax aan macquul aheyn" ka dib markii uu soo gaaray dhaawac kale oo soo gaaray Manchester City oo gaartay finalka FA Cup.
Kyle Walker ayaa lagu reebay qeybtii danbe ee ciyaarta. waqtiga 1-0 ayaa ka badisay Brighton halka madaxwaynaha magaalada uu shaaca ka qaaday in Sergio Aguero kaasoo seegay ciyaarta sababo dhaawac ah, ayaan tababar qaadan tan iyo axadii hore.
waxaan ku dhawaaqi doonaa wax, ma ahan wax aan suura gal ahayn inaan ku guuleysto Quad, "ayuu yiri Guardiola shir jaraa'id.
"Ku qor cinwaanada, guys. Waa wax aan suurtagal ahayn in lagu guuleysto Quad. Badbaadada marxaladan tartanka waa mid mucjiso ah. Taasi waa sababta ay tahay wax cajiib ah in la arko waxa ciyaartoydaasi ay xilli ciyaareedkii hore sameeyeen dhibcaha 17. Midkoodna Liverpool ama Manchester City midkoodna kuma celin karo. Sannadka soo socda, markaad u maleysid inaad is-dul-dhigto waxoogaa-qadar badan ama aad u maleyneyso in aad tahay wax aanad run ahayn. Oo mar kale, halkan ayaan joognaa. Taasi waa sababta ay tahay wax cajiib ah waxa ay ciyaartoydaas hore u sameeyeen.
"Kulan kasta wuu lumiyaa ciyaartoyda, laakiin waa caadi marka aad ciyaareyso wax badan. Waan isku dayi doonaa ilaa dhamaadka, ciyaar kasta. "
1-0 ayaa ku guuleystay goolka laga bilaabo Gabriel Ciise ee daqiiqada afraad ee madaxa Kevin De Bruyne marxalad adag.
Laakiin ma aysan aheyn qaab ciyaareed cajiib ah Guardiola ayaa ku adkeystay inuusan aheyn wax laga xumaado oo uu filanayo inuu kooxdiisa si fiican u ciyaaro kulan kasta.
"Miyaad u maleyneysaa in aan ciyaari karno 60 hal xilli xilli ciyaareed waxaanna ku guuleysan karnaa 5-0 waana wax fiican waxqabad kasta" ayuu hadalkiisa raaciyay. "Kooxkee ayay taas samayn kartaa? Xitaa kooxaha Trebles ee wadamada kale.
"Ma xusuusan, Anigu ma arag, laakiin waxaan qabaa markii Sir Alex Ferguson ku guuleystay saddex koob uu kiiskan, kulan oo dhan ayaa fantastic, waxaana ay badiyeen 4-0 ama 5-0 .
"Sida caadiga ah, semi-finalka iyo finalka waa kuwan sidan. Waxaad falanqeyn kartaa inta fursado aan abuuri karno, laakiin dadku waxay rajeynayaan inay arkaan sida wanaagsan ee aan udooneyno, waana inaan goolal dhalinaa. "Ma aqaano inta goolasha. Kulankan, booskan, ma shaqeynayo sidaas. "
Tababaraha Brighton Chris Hughton ayaa ku amaanay ciyaartoydiisa inay hogaanka u qabtaan City, waxaana uu sheegay in daafaca Walker inuu casaan la siiyay kulan casaan ah.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka ingiriiska ayaa qaatay jaalihiisii ​​jaalaha ah ee lagu cadeeyay inuu madaxiisa ka caga jiidayo xiddiga reer Brighton Alireza Jahanbakhsh go'aankaasna waxaa taageeray garsoore kuxigeen ah garsooraha.
Kyle Walker waa in loo diraa kulanka Alireza Jahanbakhsh, ayuu yiri Chris Hughton, oo ah maamulaha Brighton. Michael Regan / Getty Images
"Fikradayda, waxay ahayd casaan cas," ayuu yiri Hughton. "Waxaan weydiinaa ciyaartoyda inay daacad noqdaan, Calina ma sameynayo cunto weyn. Dhab ahaan waan arki laheyn ciyaartoydii hore ee qadiimiga ah ee burburay, waxaanay ku ridi lahaayeen dhulka.
"Waxaa jiri doona duruufo badan oo ficilkani uu siinayo qof kaar cas cas oo ficilku ku filan yahay inuu ku caddeeyo.
"Qof walba wuxuu ku adkeysanayaa [VAR]. Anigu waxaan ahay nin la beddelay, inkasta oo aanan hubin waxa uu sameyn doono, waa xitaa niyadjab in uu yahay VAR.
"Cali wuxuu sameeyey wax sax ah. Ma dooneyno in ciyaarta ay ka wanaagsanaato, tirtirto jilicsanaanta oo sugto ciyaartoydaada inay kala duwanaan karaan.
"Ma ahan Ali in uu sameeyo go'aanka saxda ah. Waxa ay ku xiran tahay saraakiisha. "